SIDEE LOO BEDELAA ORCHID: TALLAABO TALLAABO TALLAABO AH - SOOSAARKA DALAGGA
Talooyinka ugu sarreeya ee loogu talagalay qashin-qubka guriga
Orchid waa geedka monocotyledonous ah ee qoyska Orchid leh ubaxyo qurux badan iyo mid gaar ah. Marka koritaanka orchids, waa mid aad u muhiim ah in dib-u-celinta dhirta si joogto ah. Qiyaastani waa lagama maarmaan si loo hubiyo xaaladda caafimaadka leh ee orchid, maaddaama dhirta aysan jeclayn inay ku sii jirto hal dabeecad oo dheer. Si aad u ogaatid sida si habboon loo bedelo orchid, adeegso talooyinkeena iyo xirfadaha.
Markaad u baahan tahay inaad soo celiso orchid: sababaha ugu muhiimsan ee ku-tallaalidda
Waa in maskaxda lagu hayaa in gawaarida la geeyo weel cusub waa baaritaan qeexan oo ubax ah. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in aad si taxadar leh u socoto inta lagu jiro nidaamka. Sababaha ugu muhiimsan ee loo beerayo orchids waxay ku jiraan ciidda ka soo baxday waqtigeeda iyo in ay aad u xirto warshad geedka. Wakhtiga marka la doorbido in lagu soo bandhigo orchids guriga, tani waa xilliga gu'ga, sida geedka ay bilaabaan inay si firfircoon u koraan.
Waxaa jira dhowr calaamadood oo dibadda ah oo tilmaamaya baahida loo qabo isu-tallaalidda orchid:
Haddii aad dareentid in meelo badan oo bilaash ah ay ku sameeyeen weelka, dhulka ayaa ku dhawaad ​​gebi ahaanba burburay oo ay kuxireen. Xaaladdan oo kale, isku day inaad sugto ilaa xilliga gaduudku dhammaado, geedka wuxuu bilaabaa inuu soo saaro caleemo cusub iyo xididada. Tani waa xilliga ugu wanaagsan ee lagu beddelayo orchid, kaas oo si fiican loo yaqaan.
Haddii ay jirto ur la dareemi karo qoyaan, xiirid ama caleemo qallalan.
Haddii ka dib waraabinta weelka uu noqdo mid ka sii culus caadada.
Haddii xididdada orchid ay madoobaato oo ay noqdaan cawl ama buni. Haddii aad ka hesho orchid xididdada cillad degdeg ah u baahan tahay in dib loo dhigo. Caleemaha orchid caafimaad qaba waa inay noqdaan kuwo cagaaran.
Haddii orchid uu leeyahay muuqaal jaban.
Iyadoo laga yaabo in ay suurtagal tahay in loo bedelo orchid dayrta, waxaannu xusuusneynaa in Kala bedelka bisha Sibteembar-bisha ayaa weli la aqbalayaa. Si kastaba ha noqotee, bishii Nofembar, iyadoo la yareeyo saacadaha iftiinka maalinlaha, orchid wuxuu bilaabmaa inuu ku dhaco wajiga nasashada. Sidaa darteed, haddii dhirta loo baahan yahay in loo baahdo sababo deg-deg ah, waxay u fiicantahay in dib loo dhigo illaa guga.
Sida loo doorto dheriga iyo substrate ee loogu talagalay qashin qubka guriga
Haddii aad soo iibsatay orchid oo aad la yaabi kartid dheriga si aad u beertid, taladayada ayaa kuu iman doonta gargaarkaaga. Marka aad dooranaysid dheriga orchid, marka hore waxaad u baahan tahay inaad ku tiirsato nooca orchid iyo shuruudaha mustaqbalka ee geedka. Xayawaanka dhoobada ah, xididdada ayaa kori doona derbiyada waxayna jebinayaan inta lagu jiro tallaalka.
Sidaa daraadeed xididdada orchid ma waxyeelo oo waxaad fursad u heshay inay dabagalaan xaaladdooda, geedka waxaa lagu talinayaa in lagu beeray dheriyo caag ah oo hufan. Intaa waxaa dheer, weel caag ah wuxuu kaa caawinayaa sidii loo ilaalin lahaa heerka loo baahan yahay qoyaanka ciidda iyo xididdada. Sida xajmiga weelka, dheriga cusubi waa in uu ahaado mid aad u sarreeya oo ballaaran.
Ma taqaanaa? Haddii xaafad ka mid ah weel caag ah oo leh ubax qurux badan oo qurux badan oo aan la aqbali karin, dheriga ku dheji weel quraarad leh ama sariir qurux badan. Trick Tani waxay noqon doontaa balaastik maskaxeed iyo sii wanaajiyo quruxda of orchid aad. Goobta ku wareegsan geedka waxaa laga buuxsamaa dhagaxyo iyo dhafan.
Diyaarso ciidda ka hor inta aadan ku tallaalin orchid dher cusub. Ciidadu waa inay ahaato mid gaar ah. Substrate diyaar ah ayaa laga iibsan karaa dukaamo khaas ah.
Waxaa jira laba nooc oo carrada ah:
carrada for orchids epiphytic (odontoglossum, oncidium, dendrobium, cattley);
dhulka loogu talagalay orchids-ka (papiopedilum, cypripedium).
Substrate for orchids epiphytic waxaa ka mid ah xididdada jilicsan, dhuxul ama dhoobo dhuxul, haragga peat (sphagnum) iyo jilif geed.
Isku dar ah for orchids terrestriam waxaa ku jira dhuxusha, peat, ubax sphagnum, humus caleen iyo jilif.
Substrate u fiican dhamaan noocyada orchids - Tani waa ururinta dhuxusha, jilif, peat, xoqan, xididdada jilibka, xumbo iyo saafi.
Xayawaanka loogu talagalay orchids waxaa loo samayn karaa si madaxbannaan. Si arrintan loo sameeyo, qaado jilif caws oo qallalan, si wanaagsan u karkari, ka dibna ka tag oo qalaji dhawr maalmood. Kadib mar kale kari si aad u nadiifiso dhammaan fayraska iyo cayayaanka. Ka dibna gooyaa jilif qalalan qaybo siman qiyaastii qiyaastii 2 cm oo isku dar qasacad macaan oo qallalan. Nolosha sheyga ee substrate for orchids waa qiyaastii laba ilaa saddex sano, ka dibna ciidda u baahan tahay in la beddelo.
Sidee loo bedelaa orchid guri: tilmaamaha
Tixgeli sida loo bedelo orchid guriga, ka dib tilmaamaha tallaabo tallaabo tallaabo ah. Boog beddel waa nidaam ka mas'uul ah oo ku lug leh dhowr tallaabo.
Waa muhiim! Bannaanka u khibrad leh waxay ku talinayaan ka dib markii la iibsado orchid, isla markiiba ku darso dheri cusub, oo ku habboon oo sii kordhaya warshadan.
Ka hor inta aadan beerin orchid, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso qalabka iyo qalabka loo baahan yahay:
dillaac yar yar ama xiiri beerta;
kiriimyada firfircoon ama xakamaynta kale ee lidka bakteeriyada;
substrate diyaar ah;
dheji caag ah ama dhexdhexaad ah.
Ka shaqeeyaa orchids transplanting ayaa lagu sameeyaa taxanaha soo socda:
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u jiiddo dhirta ka baxda weelkii hore. Waxa ugu muhiimsan halkan ma aha in lagu burburiyo xididdada orchid jilicsan. Si tartiib ah u dheji dheriga gacmahaaga si ay carrada iyo rhizome uga dhaqaaqaan derbiyada. Si taxadar leh uga saar geedka. Haddii geedi-socodka laga soo saaro orchid ka soo baxa dherigu wax dhibaato ah u keen, weelka maqaarka ku jar.
Ka hor inta aadan beerin orchid, waxaad u baahan tahay inaad nadiifiso nudaha dhirta guriga ka soo substrate jir ah. Nidaamkani wuxuu ku haboon yahay inuu soo saaro hoos biyo. Xaaladdan oo kale, dhulku si fudud oo aan xanuun lahayn ayuu uga baxaa xididada.
Hadda u gudbi saaridda xididdada la qalajiyey iyo lafdhabarta. Si taxaddar leh u gooyn xididada xad-dhaafka leh maqas-tuur adag. Nadiifinta aagga la gooyey ee leh bakteeriyo ama kiniin-firfircoon. Iskuday inaadan taaban xididada caafimaad, waxay u horseedi kartaa cudur ku dhaca orchid dheer.
Ka dib markii nadiifinta iyo gooyey geedka, si taxadar leh u baaro xididada cayayaanka qarsoon. Wixii horumarin caadi ah iyo horumarinta ubaxa, waxaad u baahan tahay inaad ka takhalusto cayayaanka si wax ku ool ah. Haddii aad u aragto cayayaanka khatarta ah ee xididdada geedka, rinjiga diirimaadka diirran, biyo nadiif ah dhowr saacadood. Ka dibna waa lagama maarmaan in lagu daaweeyo warshad leh wakiil gaar ah oo dulin.
Si qaldan u qalaji rhizome. Wejiga qallajinta waa inuu socdaa ugu yaraan 8 saacadood.
Ka saar caleemaha oo la qalajiyey caleemo hoose. Waxaa sidoo kale lagula talinayaa in laga takhaluso burooyinka jilicsan, oo buraash ah. Xirmooyinka loo baahan yahay in la nadiifiyo.
Waxaan sii wadeynaa geedi socodka tooska ah ee orchids. Ku shub lakabka yar ee dheecaan ka samee dheriga hore ee fayodhowrka. Iska yaree orchid bartamaha taangiga. Shub substrate oo si siman u qaybiyaan nidaamka xididka. Haddii dhirtu leedahay xidigo badan, waxaadan isku dayin inaad si buuxda ugu daboosho carrada.
Sidoo kale, ha isku dayin inaad ciidda ku cadaadiso aad u adag, rizjiga ayaa si tartiib tartiib ah u xajin doona. Laakiin maskaxda ku hay in dhirta transplanted waa inaysan si xor ah ugu daadin weelka. Kuwa doonaya su'aasha ah in ay suurtogal tahay in dib loo soo celiyo orchid leh peduncle, waxaynu og nahay in tani ay tahay mid aan loo baahnayn. Orchid a firfircoon waa in si taxadar leh u jaraan peduncle ka hor transplanting. Tani waxay gacan ka geysan doontaa geedka si ay u maamulaan dhammaan khayraadka ka dib markii ay ku tallaalaan dib u soo celinta. Guud ahaan, haddii sharciyadan si adag loo raaco, daryeelka guriga iyo ku-beddelidda orchids ma keeni doonto dhibaatooyin.
Waa muhiim! Dhamaan qalabyada loo isticmaalo geedi socodka transplanting orchids, ha ilaawin inaad daaweyso daawooyinka bakteeriyada. Waa inaad siisaa dhirta ilaalin la isku halleyn karo oo ka timaadda jeermiska.
Daryeelka Orchid ka dib markaad transplanting
Wixii orchids, daryeelka saxda ah ka dib markii beer lagu guuleysto waa muhiim. Ku wareeji dheriga dhirta si aad u ilaaliso inta ugu badan ee suurtogalka ah si toos ah uga soo horjeeda iftiinka qorraxda (8-10 maalmood). Heerkulka qolka dhirta laga dhisi doono waa inuusan ka badnaan 20 ° C.
Waraabinta ugu horreysa waxa la sameeyaa ka dib 4-5 maalmood kadib qaliinka. Waxaa lagu talinayaa in la kariyo biyo ka hor inta aadan waraabin. Dhererka leh orchid biyo oo biyo ah nus saac ah. Waraabinta soo socota waxaa la sameeyaa ugu dambeyn laba toddobaad. Caleenta dhirta waxaa sidoo kale lagu waraabiyaa biyo diirimaad leh.
Bil gudaheed, orchid waxaa lagu bilaabay in lagu quudiyo macdanta iyo Bacriminta organic ku kordhay potassium, magnesium iyo nitrogen. Quudinta soo socda ayaa la sameeyaa 20 maalmood.
Ka dib markii la soo celiyo, orchid guri-guri wuxuu dhaawac u gaari karaa wakhti yar. Intaa waxaa dheer, dhirta waa mid xoogaa xakameysa koritaanka rhizome ah. Sidaa darteed, beeralayda waayo-aragnimo ah kuma talinayaan in ay ubaxaan ubax badanaa (mar mar 2-3 sanoba waa ku filan).
Ma taqaanaa? Bannaanka la yaqaan ee vanilla laga helo oo laga helo miro orchid. Si kastaba ha noqotee, ma aha noocyada kala duwan ee orchids leeyihiin caraf udgoon leh. Waxaa ka mid ah orchids iyo noocyada noocyada ah ee ka dhashaan urta hilibka cayayaanka ah. Xaqiiqo kale oo xiiso iyo faa'iido leh oo ku saabsan orchid ayaa ah maxaa aragtida orchid waxay ka caawisaa qofka inuu la qabsado xaaladaha niyadjabsan.
Haddii aad ku aragtay sida loo beeray orchid si sax ah guriga iyo geedkiina qalaad ayaa si guul leh u gudubtay beerka, ka dibna ugu dhakhsaha badan quruxda quruxda leh waxay ku farxi doontaa indhaha oo leh jajabkeeda iyo ubax geedka.